MX Linux 19: Iyo nyowani vhezheni yakavakirwa paDEBIAN 10 yaburitswa | Kubva kuLinux
Pane dzimwe nhambo takanyora nezvazvo «MX Linux» muBlog (Ona zvakapfuura zvinyorwa). Uye yeizvi zvave pachena kwatiri, nekuti zvakafanana nanhasi, ndezve nzvimbo yekutanga mu portal DistroWatch. Zvisinei, ngatiyeukei izvozvo «MX Linux» Ndicho Kugoverwa kweGNU / Linux uyo akazvarwa semhedzisiro yemubatanidzwa pakati peVagadziri uye Vashandisi veMhuri dzevamwe vaviri, ndokuti, AntiX y MEPIS.
«MX Linux» inomira pakati pevakawanda, nekuti maMhuri aya akapa zvipo zvavo zvakanaka nematarenda ekugadzira un Kugoverwa kweGNU / Linux akareruka asi akasimba, Yakagadzirwa pasi pechirevo chekupa a inoyevedza uye inoshanda desktop neyakareruka kumisikidza, kukwirira kugadzikana uye kuita kwakasimba. Uye zvese izvi muIO saizi saizi diki inokwana kurodha pasi, kushandisa, uye kuendesa.
Izvi zvakanaka uye zvinoshanda Kugoverwa kweGNU / Linux ine mavambo, sekureva DistroWatch, ChiGreek neNorth America (Greece / USA), zvakadaro nema initials «MX» inowanzotendwa kuti ine mavambo ekuMexico. Kana zvirizvo, zvinoreva aya mavara maviri anouya kubva mukuita kwe sanganisa tsamba yekutanga yeMEPIS pamwe neyekupedzisira tsamba AntiX, nekudaro zvichimiririra kubatana pakati payo 2 kuvamba nekuvandudza Nharaunda.
Izvi zvakare zvakatendera kuti zvive inosanganisirwa saiti DistroWatch, senge vhezheni ye antiX, asi pasi payo pachayo peji sekupararira kwakazvimirira pamwe nekusunungurwa kwe MX Linux 16 yekutanga beta yevanhu, Mbudzi 2, 2016. Uye kusvikira nhasi, chirongwa ichi chiri pa «versión 19» kudana «Patito Feo», iyo yatinozotsanangura muchidimbu gare gare. Kunyangwe kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve «MX Linux» unogona kuenda kune yako webhusaiti yepamutemo uye ona zvese zviri pamutemo ruzivo zviripo uye dhawunirodha iyo ISO yacho.
1 MX Linux 19: Yakashata Duckling
1.1 Kunze kwekushandisa kunyorera
1.2 MX yega yekushandisa kunatsurudza
1.3 AntiX yega yekushandisa kunatsurudza
1.4 Zvimwe zvakasiyana
MX Linux 19: Yakashata Duckling
Zvinoenderana newebsite yepamutemo ye «MX Linux», ichi «versión 19» o «Patito Feo» Iine zvinotevera hunhu, zvinoshanda uye zvirongwa:
Kunze kwekushandisa kunyorera
Zvinyorwa: Inosanganisira idzo DEBIAN 10.1 (Buster), AntiX uye MX Linux.
Desktop Nharaunda: Xfce 4.14
Imagen mupepeti: GIMP 2.10.12
Vhidhiyo maraibhurari: Tafura 18.3.6
Firmware: Kugadziridza kwakasiyana.
Kernel: 4.19 shanduro
Bhurawuza: Firefox 69
Vhidhiyo mutambi: VLC 3.0.8
Mimhanzi maneja (Mutambi): Clementine 1.3.1
Email Mutengi: Thunderbird 60.9.0
Hofisi Suite: FreeOffice 6.1.5 (Iine yavo yekuchengetedza zvigamba)
Mamwe maapplication: Yakagadziridzwa kubva kune inowanikwa DEBIAN uye MX Linux Repositories.
MX yega yekushandisa kunatsurudza
Mugadziri: Kubva pane iyo Gazelle Installer (Gazelle), zvakagadziriswa kururamisa zvakawedzerwa kune manejimendi eiyo automounting uye yekuparadzanisa maitiro.
Zuva uye Nguva: Shanduko dzinofambisa kuitwa kwemabasa paSystem wachi.
USB fomati: Kunyorera kwekutarisira USB yekuchengetedza fomati yekumisikidza mabasa.
Pasuru Yekuisa: Zvino zvinosanganisira kuratidzwa kwenhamba dzeshanduro dzePlppak application. Uye zvakare, LibreOffice inogadziridza inowanikwa kubva kuDEBIAN Backports Repositories.
Nyevero: Pasuru yekutumira mameseji ekukurumidzira kune Vashandisi veSystem.
Kugadziridza: Izvo hazvichade iyo password yemutungamiri kutarisa kuti zvakamirira here asi zvichiri kuda kuvaendesa.
Wallpapers: Inosanganisira nyowani nyowani.
Bhashiza gadziriso (Bash-config): Chishandiso chitsva chakatsaurirwa kuvandudza kuratidzwa kwekuratidzwa kwenzvimbo yebash uye kubata kwema aliases mairi.
Bhutsu-kugadzirisa: Yakagadziridzwa kutsigira (kururamisa) zviitiko zvakasiyana zvakasiyana zvekukuvara kwakanyorwa.
Desktop Themes: Inosanganisira mitezo mitsva.
Shanduko dzakasiyana: Zvishoma zvigadziriso mune mamwe maMX Linux maturusi, kusanganisa mazhinji emafaira ekubatsira mumufananidzo weIO, sarudzo yakagadziridzwa yeFAQ neshanduro dzakasanganisirwa.
AntiX yega yekushandisa kunatsurudza
Rarama AntiX Sisitimu inogadziridza, kusanganisira mamwe marongero evhidhiyo.
Informational zvinyorwa-zvakavakirwa kutanga bhuti kuiswa.
Kugadzirisa pa "yakachengeteka" vhidhiyo yekutanga modhi nhanho mune mhenyu bhuti menyu.
Yemunharaunda inotsigira rutsigiro: Anenge ese maMX ekushambadzira ekunyorera izvozvi anosanganisira ekushandura edudziro.
Sekuona kwedu «MX Linux» iri GNU / Linux Distribution iyo inopa akawanda maficha maficha uye zvivakwa kune ayo Mushandisi Nharaunda. Uye ndizvo «versión 19» kudana «Patito Feo», ndiko kusvetuka kukuru kubva mushanduro yapfuura, nekuti inotitorera hwaro hwe DHEBHANI 10 yenzira refu yekuchinja uye kugadzirisa pairi. Ehe, ivo vanoshandisa kana kufarira kushandisa «MX Linux», tinokurudzira aya mapoka e teregiramu nezve izvo kuti vagone kujoina uye kugovana zviitiko mune izvi: MX muchiSpanish, MX Linux & AntiX Spanish y Tic Tac Chirongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » MX Linux 19: Iyo nyowani vhezheni yakavakirwa paDEBIAN 10 yaburitswa